ယူရိုငှေ ၁ ဘီလြံ ဒဏျငှဆေောငျရမယျ့ Apple ကုမ်ပဏီကွီး။ – SoShwe
Home/Tech/ယူရိုငှေ ၁ ဘီလြံ ဒဏျငှဆေောငျရမယျ့ Apple ကုမ်ပဏီကွီး။
ယူရိုငှေ ၁ ဘီလြံ ဒဏျငှဆေောငျရမယျ့ Apple ကုမ်ပဏီကွီး။
APPLE ကုမ်ပဏီထှကျ ပစ်စညျးအမြိုးအစား အစုံအလငျကို ပွငျသဈနိုငျငံမှာ ပွနျလညျရောငျးခပြေးတဲ့ ပွငျသဈနိုငျငံအခွစေိုကျ eBizcuss ကုမ်ပဏီဟာ ၂၀၁၁ ခုနှဈတုနျးက ဒဝေါလီခံသှားခဲ့ပါတယျ။ eBizcuss ကုမ်ပဏီရဲ့ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူတဈယောကျက ၂၀၁၂ ခုနှဈရောကျတော့မှ နညျးပညာပိုငျးဆိုငျရာ ပွဿနာမြားကို တာဝနျယူဆောငျရှကျဖွရှေငျးပေးတဲ့ ပွငျသဈနိုငျငံ စုံစမျးစဈဆေးရေးအဖှဲ့အစညျးကို APPLE ကုမ်ပဏီနဲ့ပတျသကျပွီး တိုငျကွားခကျြတဈခု ပွုခဲ့ပါတယျ။
eBizcuss ကုမ်ပဏီရဲ့ CEO က APPLE ကုမ်ပဏီဟာ လကျကားစြေးနဲ့ဝယျယူပွီး ပွနျလညျရောငျးခပြေးတဲ့ eBizcuss ကုမ်ပဏီကို ပေးသငျ့ပေးထိုကျတဲ့ အခှငျ့အရေးတှကေို တရားမြှတခွငျးမရှိဘဲ ကနျ့သတျပဈလိုကျတာကွောငျ့ eBizcuss ကုမ်ပဏီဟာ ရသငျ့ရထိုကျတဲ့အမွတျကိုမရတော့ဘဲ ကုမ်ပဏီတဈခုလုံး မလညျပတျနိုငျဖွဈသှားခဲ့ရပွီး နောကျဆုံးမှာတော့ ဒဝေါလီခံသှားခဲ့တာကွောငျ့ APPLE ကုမ်ပဏီကို တရားစှဲဆိုခဲ့ရခွငျးဖွဈပါတယျ။
ပွငျသဈစုံစမျးစဈဆေးမှုအဖှဲ့က APPLE ကုမ်ပဏီကို ၂၀၁၂ ခုနှဈမှာ စုံစမျးစဈဆေးမှုတှပွေုလုပျခဲ့ပွီး ၂၀၁၇ ခုနှဈမှာတော့ အဆိုပါအမှုကို စုံစမျးစဈဆေးခွငျးဟာ ဆုံးခနျးတိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး ပွငျသဈနိုငျငံ စုံစမျးစဈဆေးမှုအဖှဲ့က APPLE ကုမ်ပဏီရဲ့ လုပျထုံးလုပျနညျးတှကေို ယခုအခြိနျထိ မကျြခွမေပွတျ စောငျ့ကွညျ့နခေဲ့ပါတယျ။
ပွငျသဈစုံစမျးစဈဆေးရေးအဖှဲ့က APPLE ကုမ်ပဏီရဲ့လုပျကှကျတှကေို ဇှဲကောငျးကောငျးနဲ့ မကျြခွမေပွတျ စောငျ့ကွညျ့ခဲ့တာကွောငျ့ အခုခြိနျမှာ APPLE ကုမ်ပဏီကို ဒဏျငှေ ယူရို ၁ဘီလြံဆောငျစနေိုငျခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပွငျသဈစုံစမျးစဈဆေးရေးအဖှဲ့ခေါငျးဆောငျ Isabelle de Silva က APPLEကုမ်ပဏီရဲ့ ကုနျပစ်စညျးဖွနျ့ဖွူးရောငျးခရြေးဌာနက ကုမ်ပဏီရဲ့ကုနျပစ်စညျးတှကေို လကျကားဝယျယူပွီး ပွနျလညျရောငျးခတြဲ့ လုပျငနျးတှကေို ခေါငျးပုံဖွတျအနိုငျကငျြ့တဲ့ သဘောတှတှေရှေိ့ရကွောငျး ဆိုခဲ့ပါတယျ။
အဆိုပါအမှုနဲ့ပတျသကျပွီး APPLE ကုမ်ပဏီရဲ့ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူတဈယောကျက “APPLE ကုမ်ပဏီဟာ ပွငျသဈနိုငျငံက APPLE ထုတျကုနျပစ်စညျးတှကေို တဈဆငျ့ပွနျလညျရောငျးခပြေးတဲ့ လုပျငနျးတှနေဲ့ လကျတှဲလုပျဆောငျလာတာ နှဈပေါငျး၎ဝကြျောပါပွီ။ ပွငျသဈနိုငျငံစုံစမျးစဈဆေးရေးအဖှဲ့အစညျးရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြကို ကွားသိရတာဟာ ကွကှေဲဖို့ကောငျးပါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ ၁၀ စုနှဈက ဖွဈပကျြခဲ့တဲ့ အမှုကွောငျ့ အခုလကျရှိလုပျငနျးတှကေို ထိခိုကျမှုဖွဈပျေါလာပွီး ကြှနျုပျတို့ဘကျက ပွနျလညျရှငျးပွနိုငျဖို့ အစှမျးကုနျကွိုးစားသှားပါမယျ။” လို့ ဆိုထားပါတယျ။
ယူရိုငွေ ၁ ဘီလျံ ဒဏ်ငွေဆောင်ရမယ့် Apple ကုမ္ပဏီကြီး။
APPLE ကုမ္ပဏီထွက် ပစ္စည်းအမျိုးအစား အစုံအလင်ကို ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ ပြန်လည်ရောင်းချပေးတဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံအခြေစိုက် eBizcuss ကုမ္ပဏီဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တုန်းက ဒေဝါလီခံသွားခဲ့ပါတယ်။ eBizcuss ကုမ္ပဏီရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ယောက်က ၂၀၁၂ ခုနှစ်ရောက်တော့မှ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ဖြေရှင်းပေးတဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်းကို APPLE ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်ပြီး တိုင်ကြားချက်တစ်ခု ပြုခဲ့ပါတယ်။
eBizcuss ကုမ္ပဏီရဲ့ CEO က APPLE ကုမ္ပဏီဟာ လက်ကားဈေးနဲ့ဝယ်ယူပြီး ပြန်လည်ရောင်းချပေးတဲ့ eBizcuss ကုမ္ပဏီကို ပေးသင့်ပေးထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို တရားမျှတခြင်းမရှိဘဲ ကန့်သတ်ပစ်လိုက်တာကြောင့် eBizcuss ကုမ္ပဏီဟာ ရသင့်ရထိုက်တဲ့အမြတ်ကိုမရတော့ဘဲ ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံး မလည်ပတ်နိုင်ဖြစ်သွားခဲ့ရပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ ဒေဝါလီခံသွားခဲ့တာကြောင့် APPLE ကုမ္ပဏီကို တရားစွဲဆိုခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်သစ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအဖွဲ့က APPLE ကုမ္ပဏီကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာတော့ အဆိုပါအမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဟာ ဆုံးခန်းတိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ပြင်သစ်နိုင်ငံ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအဖွဲ့က APPLE ကုမ္ပဏီရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို ယခုအချိန်ထိ မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။
ပြင်သစ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က APPLE ကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်ကွက်တွေကို ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်ခဲ့တာကြောင့် အခုချိန်မှာ APPLE ကုမ္ပဏီကို ဒဏ်ငွေ ယူရို ၁ဘီလျံဆောင်စေနိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်သစ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Isabelle de Silva က APPLEကုမ္ပဏီရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေးဌာနက ကုမ္ပဏီရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကို လက်ကားဝယ်ယူပြီး ပြန်လည်ရောင်းချတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ခေါင်းပုံဖြတ်အနိုင်ကျင့်တဲ့ သဘောတွေတွေ့ရှိရကြောင်း ဆိုခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး APPLE ကုမ္ပဏီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ယောက်က “APPLE ကုမ္ပဏီဟာ ပြင်သစ်နိုင်ငံက APPLE ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို တစ်ဆင့်ပြန်လည်ရောင်းချပေးတဲ့ လုပ်ငန်းတွေနဲ့ လက်တွဲလုပ်ဆောင်လာတာ နှစ်ပေါင်း၄၀ကျော်ပါပြီ။ ပြင်သစ်နိုင်ငံစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကြားသိရတာဟာ ကြေကွဲဖို့ကောင်းပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ စုနှစ်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အမှုကြောင့် အခုလက်ရှိလုပ်ငန်းတွေကို ထိခိုက်မှုဖြစ်ပေါ်လာပြီး ကျွန်ုပ်တို့ဘက်က ပြန်လည်ရှင်းပြနိုင်ဖို့ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားပါမယ်။” လို့ ဆိုထားပါတယ်။
Previous ???????????????????????? (?) ?????????????? ????????????????????? ??????????????????????????
Next အစိုးရဝနျထမျးတှကေို TikTok အသုံးပွုခှငျ့ ပိတျပငျတားမွဈလိုကျတဲ့ အမရေိကနျပွညျထောငျစု လှတျတျောအမတျမြား။